Njikọ na-ejighị n'aka na onye ọkpụkpọ na Tunngle
Dị ka ị maara, a na-emezi Tunngle iji soro ndị ọrụ ndị ọzọ soro Intanet. Ya mere ọ na-ewute ya nke ukwuu mgbe usoro ihe omume ahụ na-ekwuputị na enwere njikọ ọjọọ ma ọ bụ onye ọkpụkpọ ahụ. Ọnọdụ a siri ike, a ghakwara ịme ya n'otu n'otu. Ihe kachasị mkpa nke nsogbu "Njikọ na-ejighị n'aka na ọkpụkpọ a" nwere ike igbochi ịmalite egwuregwu ahụ na igodo ahụ a họpụtara ahọpụta, gosipụta usoro dị egwu, na-emetụtakwa ọsọ nke igosipụta ozi na nkata.
Njehie 4-109 na Tunngle
Tunngle bụ usoro ihe omume nke nwere usoro mgbagwoju anya ma ọ bụghị mgbe niile. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nke a ma ọ bụ nke mmebi ahụ nwere ike ime ọtụtụ mgbe. Na Tunngle, ihe dị ka ozi 40 banyere ọdịda dị iche iche na njehie, nke anyị kwesịrị ịgbakwunye dịka ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ nwere ike ịmeghị.
Tunngle bụ ọrụ na-ewu ewu ma chọọ ọrụ n'etiti ndị na-achọ itinye oge ha na egwuregwu na-akwado. Nke ahụ abụghị naanị onye ọ bụla maara ama iji eji usoro a mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ihe isiokwu ahụ ga-abụ. Ndebanye aha na Ntọala Ị ga-ebu ụzọ debanye aha na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Tunngle.
Ndebanye aha na Tunngle
Na-arụ ọrụ na Tunngle, dị ka ọrụ ọ bụla ọzọ, na-amalite mgbe nile site na nzọụkwụ mbụ kachasị mkpa - mbụ ị chọrọ inweta akaụntụ gị. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịdebanye aha site na usoro kwesịrị ekwesị, yana naanị mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume iji ọrụ ọrụ ahụ. Ikwesiri ichoputa otu esi edebanye aha.
Na-akpata na ngwọta nke njehie 4-112 na Tunngle
Tunngle abụghị ọrụ Windows nyere, mana ọ na-arụ ọrụ n'ime usoro maka ọrụ ya. Ya mere ọ bụghị ihe ijuanya na usoro nchekwa dị iche iche nwere ike igbochi ọrụ nke usoro ihe a. Na nke a, koodu mmejọ nke koodu 4-112 pụtara, mgbe nke a gasịrị, Tunngle akwụsịre ịrụ ọrụ ya.
Ọrụ tunngle na-ewu ewu n'etiti ndị na-enweghị mmasị igwu egwu naanị. N'ebe a, ị nwere ike ịmepụta njikọ na egwuregwu n'ebe ọ bụla n'ụwa iji nwee obi ụtọ ma ọ bụ egwuregwu ahụ. Ọ ka na-eme ihe niile n'ụzọ ziri ezi ka nsogbu ndị nwere ike ghara igbochi ịnweta nkwonkwo nke nnukwu anụ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ bara uru.
Mepee ọdụ ụgbọ mmiri ma mee Tunngle
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọkachamara nwere mmasị na ya, iji tunngle ezughị ezu iji wụnye usoro ihe omume ahụ ma mee ka ọ bụrụ egwuregwu egwuregwu kachasị amasị gị. Ọ dị mkpa ịghọta na usoro ihe omume ahụ abụghị usoro ọrụ kachasị mfe na nke a pụrụ ịghọta, n'ihi ya, mgbe mbido mbụ ahụ dị mkpa iji mee ntọala ngwa ndị dị mkpa.
Tunngle anaghị amalite
N'agbanyegh i ihe siri ike ikweta, Tunngle nwere ike imebi dika usoro ozo. Ịmara nke eziokwu a na-akpatakwa ọnọdụ ahụ, n'ihi na ndị ọzọ, nke ndị ọrụ na-abịakarị ebe a, ga-atụgharịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere na atụmanya a dị ntakịrị, ị ga-ebu ụzọ wepụ nsogbu ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Tunngle 2020